ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ထိခိုက်နေရပြီး သတင်းသမားတွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံနေတာတွေဟာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်မှာ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ကို မြန်မာသတင်းသမားများ ကာကွယ်ရေး ကော်မတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း အကျပ်အတည်းကြုံခဲ့ကြရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ ဟာ အခုတော့ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်တွေရဖို့ စပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တော့ မှာဖြစ်တာကြောင့် အကျပ်အတည်းကနေ လျော့ပါးသက်သာသွားမယ့်အလားအလာ ရှိနေပါပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကြား ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အဓိက အခြေခံပြဿနာအကြောင်းအရာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ မနေ့ သောကြာနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီး Filippo Grandi က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မစ်ယန်ဟီးလီရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ သတိပေးချက်ဟာ မလိုအပ်ဘဲ စိုးရိမ်မှု လွန်ကဲရာရောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ညီမျှခြင်းမြန်မာ အဖွဲ့ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးမင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး7July ၅၅နှစ်ပြည့်မှာ တောင်းဆို
၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်က ဗုံးခွဲဖျက်စီးခဲ့တဲ့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို ခေတ်အဆက်ဆက်ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့ လူငယ်ကွန်ရက်တွေက လက်ရှိ NLD အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ပုဒ်​မ၆၆(ဃ )ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တပ်မတော်ကနေ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းသမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကို ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ကချင်ပြည်နယ်က သတင်းမီဒီယာသမားတွေကနေ ဒီကနေ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဆန္ဒဖေါ် ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ၁၀ နှစ်ကျော် အချိန်ယူကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူနေထိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရိုက်တာသတင်းတပုဒ်ကို အခြေခံပြီး မအင်ကြင်းနိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
မိုကန်လူမျိုးစုနဲ့ ပင်လယ်ရဲ့ သယံဇာတ
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေကြောင့် ပင်လယ်ရဲ့ သယံဇာတကွယ်ပျောက်ကုန်သလို ပင်လယ်ထဲမှာ လှည့်လည်နေထိုင်ပြီး ဘာအကူအညီမှ မပါဘဲ အလွတ်ဒိုက်ထိုး ငါးဖမ်းကြတဲ့ မိုကန်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ဓလေ့ပျောက်ကွယ်မယ့်အရေး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိလာနေပါတယ်။ AFP သတင်းတပုဒ်ကို အခြေခံပြီး မသိဂီ င်္ထိုက် တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၇. ၀၇. ၂၀၁၇
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ရှေ့သီတင်းပတ် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိစေဖို့ မြန်မာအစိုးရက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေကို စီမံချက်နဲ့ ဆက်လက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ရာနီးပါး အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ အလုပ်သမားရေး ကူညီဆောင်ရွက်သူတွေက ပြောပါတယ်။